Istaraatijiyadaha Multichannel E-commerce ee Xilliga Fasaxa Isbedelaya | Martech Zone
Istaraatijiyadaha Ganacsi ee Multichannel ee loogu talagalay Xilliga Fasaxa Isbedelaya
Arbacada, Nofeembar 25, 2020 Arbacada, Nofeembar 25, 2020 Josh Wetzel
Fikradda Black Friday iyo Cyber ​​Isniinta oo ah maalin qura oo hal maalin ah ayaa is bedeshay sannadkan, iyadoo tafaariiqleyda waaweyn ay xayaysiiyaan Black Friday iyo Cyber ​​Monday heshiisyo guud ahaan bisha Nofeembar. Natiijo ahaan, way ka yaraatay ku mashquulinta hal-mar, heshiis hal-maalin ah sanduuqa horeyba loo soo buuxiyay, iyo inbadan oo ku saabsan dhisida istiraatiijiyad muddada-dheer ah iyo xiriir lala yeesho macaamiisha inta lagu jiro xilliga fasaxa oo dhan, iyadoo la soo bandhigayo fursadaha ganacsi ee saxda ah waqtiyada saxda ah iyadoo la adeegsanayo beegsiga kanaallada kaqeybgalka internetka.
Tani sidoo kale waa sanad gaar ah oo habka coronavirus uu u saameynayo kaydinta dhammaan guddiga. Sababtoo ah joojinta wax soo saarka iyo dib udhaca, waxaa jiri doona gabaabsi aad uga badan waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan ee sanadlaha ah. Marka istiraatiijiyad ahaan in la fahmo danaha macaamiisha iyo mawduucyada iyo sidoo kale si xeeladeysan loola xiriiro beddelaad ama cusbooneysiin (adoo diraya waqtiga-dhabta ah, dib ugu soo noqoshada ogeysiisyada keydka, tusaale ahaan) waxay fure u noqon doontaa in loo beddelo xiisaha iibsadaha iibsi.
COVID-19 wuxuu horseed u ahaa isbedel ballaaran oo loo geysto adeegsiga internetka xilligan fasaxa ah.
Waxaa jiray 45% YoY oo ku booday Q2 iibka khadka tooska ah waana inaan filaynaa inaan aragno koror la mid ah Q3 iyo Q4 maaddaama macaamiisha ay labaduba ka raaxo badan yihiin iibsashada khadka tooska ah isla markaana lagu qasbay sababo la xiriira xaddidaadda dukaan jireed ee qaybo badan oo dalka ka mid ah.
Source: Xafiiska Tirakoobka Mareykanka
Maalinta Prime Prime ee Oktoobar ayaa sidoo kale horseeday qulqulatooyin tartamayaal ah oo bixiya heshiisyo Jimcihii hore ee Jimcaha sanadkan, iyagoo abuuraya daaqad iibsi oo dheeri ah oo ka baxsan kaliya dhammaadka wiigga.
In ka badan 25% dhammaan iibka tafaariiqda ayaa ka dhici doona khadka tooska ah sannadka 2024 wuxuuna Forrester saadaaliyay wadarta iibka tafaariiqdu inuu hoos u dhici doono 2.5% sannadkan.
Qaadashada maskaxda ku saleysan xogta waxay muhiim u tahay dhammaan suuqleyda raadinaya inay jaraan buuqa inta lagu jiro xilliyada mashquulka ah. Iyada oo ganacsiyada yaryar ay la tartamayaan tafaariiqleyda waaweyn ee loogu talagalay dareenka macaamiisha iyo iibintooda, dukaamada waa in ay ku tiirsanaadaan tikniyoolajiyadda iyo shaqsiyeynta si looga fakaro meel ka baxsan sanduuqa maahmaahda si looga dhex baxo dadka.
Suuqgeynta Multichannel waa Muhiim u ah Ka Qeybgalka Macaamiisha
Suuqgeynta Multichannel waxay si joogto ah ugu joogtaa adiga macaamiisha marinnada badan, sida webka, mobilada, bulshada iyo farriimaha. Faa'iidada ugu weyn ayaa ah iibsadahaaga (macaamilka ama booqdaha) inuu kula falgeli karo astaantaada xulashadooda kanaallo kala duwan, wuxuuna ku yeelan karaa khibrad isdaba-joog ah, oo aan xuduud lahayn oo leh astaantaada iyadoon loo eegin kanaallada ay doorbidaan. Suuqgeynta Multichannel waxay muhiim u tahay caadooyinka isticmaalka sii kordhaya ee macaamiisha maanta, kuwaas oo u rajeeyay suuq geyn gaar ah, bartilmaameed.
Ganacsiyada sida ugu wanaagsan loo dejiyay ayaa ah kuwa u furan isbeddelka jawiga isbeddelaya, gaar ahaan sannadkan marka la eego faafitaanka. Ganacsiyada isku xidha websaydhka, moobiilka, iyo bulshada oo ka faa'iideysta wadiiqooyin kala duwan oo fariimo ah sida emaylka, riixista, iyo sms waxay hubin doonaan inay joogaan goob kasta oo iibsade mustaqbal leh uu doonayo inuu ku biiro.
Multichannel kaliya maahan olole, ee waa istiraatiijiyad asaasi ah. Tallaabada ugu horreysa waa in la fahmo halka ay macaamiishaadu hadda ku hawlan yihiin, ka dibna mudnaanta la siinayo horumarinta khibrad isdaba-joog ah oo loogu talagalay booqde kasta oo ka mid ah kanaalladaas. Ka bilow bogga jawaabta leh, adigoo u maleynaya in loo cusbooneysiiyay marin u helitaanka dhammaan kombuyuutarrada, Mobile iyo Tablet booqdayaasha. Kadib waxaad ku kabi doontaa wadiiqooyinka kaqeybgalka aasaasiga ah khibradaha la midka ah ee ku wajahan goobaha warbaahinta bulshada iyo dhammaan marinnada farriimahaaga. Tani waa inay noqotaa mid ka kooban SMS, riix iyo emayl, oo ka shaqeysa sidii loo shakhsiyeyn lahaa macaamil kasta oo uu doorbido.
Tusaale ahaan suuqgeynta multichannel ee shaqeynaya, waxaan eegi karnaa WarbyParker: waxay leeyihiin macaamiil bartilmaameed dheeri ah oo dijitaal ah, waxay dhisteen khibrad macaamiil isku duuban oo jireed iyo dijitaal ah. Waxay adeegsadaan ogeysiisyo riix si ay ula macaamilaan macaamiisha firfircoon, SMS-ka ballamaha iyo inay dib u dhexgeliyaan isticmaaleyaasha ka baxay kanaallada kale, waxayna u isticmaalaan emaylka farriinta macaamil sida rasiidhada. Xitaa waxay adeegsadaan fariin toos ah oo jirka ah si ay u muujiyaan qaabab cusub. Taabasho kasta oo macaamiil ahi waa farriin isdaba joog ah oo ay bixinayaan, kanaalka oo si taxaddar leh loogu qaabeeyey ujeeddada farriinta.
Hababka ugu Fiican ee Suuqgeynta Multichannel
Waa kuwan qaar ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee si wax ku ool ah u gaarsiinaya isticmaaleyaashaada oo aad u kordhiso iibsadayaasha fasaxa adoo adeegsanaya istiraatiijiyad isgaarsiin multichannel:
Fahmaan meesha macaamiishaadu firfircoon yihiin oo ay maalgashadaan kanaalladaas. Kaliya waad dooran kartaa kanaalka saxda ah, maadaama maaddaama maaliyaddu aysan micnaheedu ahayn kanaal kasta. Xulo kuwa macnaha ugu badan ka leh yoolalkaaga ganacsi, badeecadaada, iyo tan ugu muhiimsan, macmiilkaaga.
Samee joogteyn. U qaabee wax walba kanaalka, laakiin ilaali joogteynta sumadda iyo farriinta dhammaantood
Ku kasbato xuquuqdaada suuq kasta: Ka-bixitaannada iyo isdiiwaangelintu waxay noqon karaan wax socda oo adeegsadayaashu si dhakhso leh ayey uga noqon karaan marinkaas adag ee lagu guuleystay. Hubso inaad raacdo ballanqaadkaaga si aad u siiso qiimaha isticmaalaha dhabta ah kanaal kasta. Ka fikir sharciga 1: 4 ee warbaahinta bulshada: 1-dii ogeysiin ee is-dhiirrigelin ah, hubso inaad u dirtay 4 farriin diiradda saareysa isticmaaleha oo leh qiime macmiil dhab ah.
Qayb, qayb, qayb. Dufcaddii iyo qaraxu waa wax la soo dhaafay, macaamiishana si dhakhso leh ayey ugu filaadeen inay la socoto farriin ku habboon oo shakhsi ahaaneed kanaal walba. Sii isticmaaleyaasha fursad ay ku doortaan waxyaabaha ay ka helayaan kanaalada. U adeegso waxqabadkooda iyo xog kasta oo akhlaaqeed oo aad haysato si aad ugu hagaajiso farriimahaaga sida ugu macquulsan, adigoo tirtiraya farriimaha aan khusayn.
Ku Abuur Deg-deg Xayeysiis Waqti-xasaasi ah. Tusaale ahaan, Ku orod dhiirrigelin "heshiis saacadda ah", adoo abuuraya xitaa deg-deg dheeri ah adoo siinaya qiimo-dhimis dheeri ah dusha sare ee qiimaha iibka, una isticmaal tan madal aad ku kordhineyso liiska xulashada macaamiisha ee Push & SMS Soo iibso dukaanka Plus, InspireUplift waxay aragtay koror 182% ah dakhliga adoo adeegsanaya ogeysiisyada riixitaanka ee istiraatiijiyadooda kaqeybgalka macaamiishooda.
Farriintaada Ka Dhig Mid Muuqaal Ah. Ku dhis isdhexgal gaaban laakiin saameyn ku leh fariintaada. On Black Friday, ogeysiisyo hodan ah ayaa u digi kara isticmaaleyaasha heshiisyada soo socda dhowr maalmood ka hor maalinta weyn. Xitaa waad abuuri kartaa tirinta illaa Jimcaha Madow bilaabmayo. Kadib, markey jahwareerka bilowdo, waxaad isticmaali kartaa fariin hodan ah si aad u xasuusiso isticmaaleyaasha intee in leeg ayaa harsan ilaa dhamaadka Jimcaha Madow (ama markasta oo heshiiskaagu ugu dambeyn dhaco).
U Diyaar Garow Hore Isticmaalka Tijaabada A / B. Imtixaanka A / B wuxuu noqon karaa mid ka mid ah aaladaha ugu qiimaha badan ee ku jira qalabkaaga, tijaabinta laba nooc oo fariintaada ah oo ka dhan ah midba midka kale dhagaystayaasha la midka ah, iyo u kuurgalida natiijada. Adeegso dabagalka dhacdooyinka si aad u hubiso fariinteedu keeneyso natiijada la rabay (dhaafsiisan hal guji), ka dibna u isticmaal taas inaad ku kobciso ololaha dhagaystayaashaada ballaaran.
Shaki kuma jiro tani inay tahay sanad shisheeye oo loogu talagalay eCommerce, laakiin adoo la jaanqaadaya una hogaansamaya dhaqamada ugu fiican iyo fariimaha saxda ah iyo meelaha lagala xiriirayo macaamiishaada, magacyadu wali waxay ku wadi karaan dakhli si guul leh inay uga soo baxaan dadka badan.
Tags: 2020Imtixaanka A / Bjilicsan madowjoogtaynta astaantaogeysiisyada biraawsarkae-commerceecommercexiridbadansuuq geyn badanistaraatijiyad suuq geyn badanonseignalqaybintaKa adeegso dukaameeyahawaqti xasaasi ah
Josh Wetzel waa Madaxa Sarkaalka Dakhliga ee OneSignal, hogaamiyaha suuqa ee kaqeybgalka macaamiisha, xoojinta riixitaanka mobilka, riixida websaydhka, emaylka iyo farriimaha gudaha ee loogu talagalay in ka badan 800,000 shirkadood. Wuxuu leeyahay labaatan sano xirfad shaqo dhisida ganacsiga dhijitaalka ah iyo ganacsiyada barnaamijyada softiweer, oo leh hoggaanno hoggaamineed eBay, PubMatic iyo Bazaarvoice.
WPML: Ku Tarjun Boggaaga WordPress Isticmaalkan Qalabkan Luqadaha Badan iyo Adeegyada Tarjumaadda Xulashada
Dhaqdhaqaaqa UZE: Goobta Suuqa ee Xayeysiinta Guryaha ee Guryaha ee Guurguura